NTỌALA NA AUTOCAD - AUTOCAD - 2019
N'ahịa nke ngwa maka GPS na CIS, omenala bọmbụ na-achịkwa site na ngwọta site na ndị mmepe mpaghara - Yandex Navigator, Navitel Navigator na N'ezie 2GIS. Banyere ngwa ikpeazụ ma a ga-atụle ya n'okpuru ebe a.
Map ndị dị na ya
Dị ka ngwa si na Navitel, 2GIS chọrọ iji map na-ebute na ngwaọrụ ahụ.
N'aka nke aka, nke a dị mfe, ma na nke ọzọ, ọ nwere ike ịkwanye ụfọdụ ndị ọrụ. Mwepu ọzọ nke ngwọta a bụ obere ọnụ ọgụgụ nke map - naanị obodo ukwu nke CIS mba dị.
N'ozuzu, ọrụ 2GIS adịghị dị iche na ndị asọmpi.
Site na windo ihu ala, mbugharị, nhazi, nhazi, nlele anya, na nhọrọ nke na-ebufe geodata na ngwa ndị ọzọ dị. Ihe ndị dị mkpa ịkọtara bụ akara nke ọnụ ọgụgụ satellite a na-arụ ọrụ, dị na nkuku aka nri.
Ma ngwa maka ụzọ ndị na-ewu ụlọ pụrụ ịnya isi maka analogs - nhọrọ na ntọala dị oke.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-ahọrọ ịkwaga site na igafe ọha, ị nwere ike wepu edemede ndị ị na-adịghị mkpa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ụgbọ ala ahụ, onye ọkwọ ụgbọ mmiri ga-agbanye ozugbo, nke ga-eduzi gị n'akụkụ ụzọ ahụ.
Mgbe nhọrọ ahọrọ "Ụgbọ ala", ngwa ahụ ga-enye gị ndepụta nke ọrụ ndị dị: site na Uber na ụlọ ọrụ mpaghara.
Ebe ndị nwere mmasị
Akụkụ nke 2GIS bụ nhọrọ nke ụdị isi dị iche iche na otu obodo.
A na-ekewa ha n'ime edemede: ebe ntụrụndụ, ịgba veranda, ebe ndị nwoke na-anọ ebe nkiri, fim, na ihe ndị ọzọ. Ngwunye dị mma bụ ụdị. "New ke obio" - site na ebe a, ndị ọrụ nwere ike ịchọta banyere ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ oriri ndị e meghere ọhụrụ, ụlọ ọrụ ndị a nwere ike ịnweta mgbasa ozi.
2GIS dị iche na ndị asọmpi site na ike ịmepụta profaịlụ gị, nke nwere ike jikọta na akaụntụ sitere na netwọk mmekọrịta ndị mmadụ.
N'ihi nhọrọ a, ị nwere ike ịlele ebe ị gara, kesaa ọdịnaya nke ọkacha mmasị gị, ma ọ bụ chọọ ndị mmadụ na map si n'aka ndị na-agagharị. Jiri obi ụtọ, karịsịa mgbe ị bi n'obodo buru ibu dika Moscow ma ọ bụ Kiev.
Onye Mmepụta Mmekọrịta
Ndị ọrụ nke ọrụ 2GIS na-arụ ọrụ mgbe niile iji melite ya, ma kwenyeghachi onye ahịa.
Ị nwere ike ma hapụ nzaghachi banyere ngwa ahụ, ma ọ bụ mee aro ma ọ bụ kwuo na enweghị ike. Dị ka omume na-egosi, zaghachi ngwa ngwa ma zaghachi ngwa ngwa.
Nhazi ndị ahịa
Ntọala nke ntọala dịnụ adịghị aba ọgaranya, ma nke a na-ewute site na mfe.
Ihe ọ bụla nwere ike ịghọta ọbụna onye mbido, nke a na-ejighị n'aka.
Russian asụsụ ndabara;
Utu nke uzo ulo;
Enweghị ike iji.
Obere obere kaadi kaadị;
2GIS bụ otu n'ime usoro mmemme kachasị ewu ewu na CIS. Na ngwa a, o yikarịrị ka ị gaghị enwe ike ịnyagharị n'èzí, kama maka ụzọ ndị dị gburugburu obodo ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nhọrọ zuru oke.
Download 2GIS maka n'efu
Download ngwa ngwa kachasị ọhụrụ nke ngwa ngwa Google Play
https://termotools.com ig.termotools.com © Autocad 2019